Arbily ID205 smartwatch famerenana, fiasa ary vidiny | Androidsis
Rafa Rodriguez Ballesteros | | hevitra, SmartWatch
Raha mbola anisan'ireo tsy nanapa-kevitra ny handray ny dingana mankany amin'ny akanjo itsy ianao, anio dia hanome anao antony vaovao tsy hieritreretana azy intsony izahay. Efa taona vitsivitsy lasa izay no nidiran'ny smartwatches teny an-tsena. Saingy na dia somary saro-kenatra aza ny fitadiavany voalohany, mazava fa eto izy ireo hijanona. Notsapainay ny smartwatch Arbily ID 205 ary holazainay aminao ny hevitray.
Miaraka amin'ny smartwatches dia misy zavatra mitovy amin'izany mitranga amin'ny headphones tsy misy tariby miaraka amin'ny teknolojia True Wireless Sound. Tany am-piandohana dia tena zara raha nisy ny safidy, ary saika voarara ny vidiny. SAINGY aorian'ny fanitarana tolotra nataon'ny mpanamboatra maro hafa ny safidy dia mahaliana kokoa. Efa vokatra sonia Arbily isan-karazany ireo izay azontsika notsapaina, ary tsy mandiso fanantenana azy ireo amin'izao fotoana izao.
1 Arbily ID205, safidy mahaliana hisafidianana ny smartwatch anao
2 Volavola tsara tarehy tsy misy filalaovana
3 Menu sy rindrambaiko
4 Ny mahatsara sy maharatsy ny Arbily ID205
5 Latabatra fampisehoana teknika
Arbily ID205, safidy mahaliana hisafidianana ny smartwatch anao
Ho an'ireo izay mitady famantaranandro mahay mamaly ny filany nefa tsy mandany vola be ho hitanao fa mahaliana ilay Arbily ID205. Azo antoka fa anisan'ireo azo atao ny iray izay mpividy hatramin'izao dia ny Xiaomi Amazfit Bip. Tsy misy isalasalana ny famantaranandro tsy mahadiso fanantenana. Ary izay Tsy misy vokatra. ho an'ny kely noho ny noeritreretinao.
Ankehitriny, miaraka amin'ny fiambenana Arbily, safidy vaovao no miditra tanteraka ao amin'ny pisinina. Smartwatch izay atolotra tsy misy fanomezana sarotra izay rehetra atolotry ny fifaninanana. Ary sahy manao azy aza fanatsarana betsaka ny vidinyIo ve no notadiavinao?
Ara-dalàna raha mahasarika ny saina ny vokatra iray amin'ny haavon'ny zavatra hitantsika, ary miaraka amin'ny vidiny mahaliana kokoa. Ny Arbily dia nantsoina mba hampidina ny sisin'izay ilaina hampanjariam-bola hananana smartwatch feno, mahay toa ny ankamaroany ary miaraka amin'ny endrika tia sy mahatsapa tsara.
Volavola tsara tarehy tsy misy filalaovana
Rehefa ny mahaliana antsika voalohany no tombontsoa azo atolotry ny vokatra iray dia mandeha any aoriana ny famolavolana. Nefa miharihary hatrany izany famolavolana tsara dia manisa isan-jato isan-jato hanapahana safidy iray na iray hafa. Ary tao Arbily dia noheverin'izy ireo fa raha te hifaninana dia tsy lafiny iray tokony tsy hiraharaha azy ireo izany.
Ny Arbily ID205 dia smartwatch misy a fisehoana mahonon-tena sy kanto. Ary izany dia misaotra ny tsy fananana singa tsy mandeha amin'ny laoniny afaka mampifanaraka tsara amin'ny fomba rehetra. Rehefa miresaka momba ny azo itondra isika dia tena ilaina ny mitady teboka izay mitambatra hatramin'ny farany, ary nahatratra izany i Arbily.
Raha mijery ny fatin'ny famataranandro isika dia mahita endrika mahitsizoro izay mampatsiahy ny safidy hafa eny an-tsena. Tsy azontsika atao ny tsy mahatadidy ny Apple Watch, ary koa izay mety ho mpifaninana mivantana indrindra aminy, ny Amazfit Bip. Na dia hitantsika aza fa tsy mitovy amin'ny roa amin'ny singa ara-batana maromaro. Tianao ny zavatra hitanao? Tsy misy vokatra. any Amazon miaraka amin'ny fihenam-bidy 15% noho ny kaody B2QVAWNN.
Trano fiambenana Namboarina tamin'ny firavaka vy. Tena mahasarika ny famaranana vy mainty. Ary mahatonga azy io ho matanjaka amin'ny maso ary hahatsapa ho matanjaka amin'ny fikasihana. Tokony hatao manohitra tsara ny dondom-baravarankely sy ny gorodona fanaon'ny fampiasana. Na dia zavatra azo jerena aza aorian'ny fampiasana lava kokoa.
Eo aloha no misy anao Efijery miloko 1 inch. Miaraka amin'ny tena vahaolana tsara sy haavo mamiratra. Tsy mandany vola na inona na inona izahay raha mamaky hafatra na manamarina ny fotoana na dia eny amin'ny hazavan'ny masoandro any ivelany aza. Angamba azontsika atao ny manamarika fa ny fanararaotana bebe kokoa ny ampahany anoloana dia afaka manana efijery lehibe kokoa isika. Amin'ny faritra ambany dia misy faritra fitaratra tsy misy bokotra mikasika izay toa tavela.
Ao amin'ny ambany dia ny sensor ho an'ny fifehezana ny fitempon'ny fo. Azontsika atao ny manamboatra ny Arbily 205ID mba handrefesana ho azy ny tahan'ny fitepon'ny fontsika. Na afaka misafidy tanana isika isaky ny maniry hamaky avy hatrany ny fitepon'ny fontsika. Ambonin'ity dia ny tsimatra amin'ny famenoana famantaranandro.
Amin'ny sisiny tamin'ny famantaranandro hitantsika bokotra roas. Miaraka amin'ny mikasika sy mikitroka izay mahatonga ny fikasihan-tanana sy ny fikapohana hampahazo aina sy hahomby. Amin'ny bokotra roa no hahazoantsika fanaraha-maso samihafa, ary manambatra azy ireo mihitsy aza azontsika atao ny mifehy, ohatra, ny fanombohana na fiafaran'ny fampihetseham-batana voafantina.
Tsy misy vokatra. tsy misy sarany fandefasana.
Mijery ny fehikibo, hitantsika fa marina izany vita amin'ny silipo tsara kalitao. Malemy sy mahafinaritra tokoa ny mikasika, ary ankoatry ny mahazaka fanoherana dia mahazaka ny hamandoana avy amin'ny hatsembohana sy ny famafazana tsara izy. Manisa isa fanidiana tsotra lohataona karazana ka afaka manakalo azy mora foana isika.
Menu sy rindrambaiko
Tsy mahagaga, ity Arbily ID205 ity dia manasongadina a ny rafitra fiasan'ny orinasa manokana. Un tena lisitra maso sy intuitive ary tontolo iainana safidy. Raha nifidy ny safidy izahay mba hanazavana ny efijery amin'ny fihodinan'ny tanana, dia tsy mila mikasika ny bokotra iray isika. Na dia tiantsika hivadika aza izy io indray mandeha dia maty isika dia afaka manao azy amin'ny alàlan'ny fanindriana ireo bokotra roa.
Indray mandeha miaraka amin'ny efijery dia hitantsika fampahalalana momba ny daty, ora, haavon'ny batterie ary ny "zava-bita" amin'ny lafiny dingana, kaloria sy ny hetsika natao. Ary manana isika csafidy efatra samy hafa izay azontsika idirana arakaraka ny lalana ahodinantsika ny rantsan-tanantsika eo amin'ny efijery lehibe.
Raha atsofoka eo amin'ny efijery ny rantsan-tanantsika amin'ny ankavia, mahita menio fototra isika izay ahafahantsika misafidy hetsika efatra. Afaka mametraka ny famantaranandro isika fomba fitehirizana bateria, raha tsikaritray fa akaiky ny fanjifana ny baterinao. Hitanay koa ny safidy jiro, izay manala ny efijery amin'ny famirapiratana tanteraka. Ary koa ny safidy dia tsy manelingelina, mamono ny fampandrenesana ary mampihetsika na manafoana GPS.
Raha mizotra mankany amin'ny lafiny mifanohitra isika, amin'ny ankavanana, dia mahita hafa menio misy safidy hafa fampiasana. Afaka mifidy an'izay isika karazana fanatanjahantena samihafa, raiso ny famakiana ny fitepon'ny fony. Mode "miala sasatra" izay manampy antsika miaina mandritra ny minitra vitsy. Ary afaka misafidy ny fanairana, famantaranandro, fitsitsiana angovo na zahao ireo firaketana momba ny fanatanjahantena anay.
Ny ambin'ny configurations amin'ny sehatra misimisy kokoa, ary koa ny fakan-kevitra momba ny zava-bita tamin'ny fanatanjahantena ananantsika misy amin'ny fampiharana. App, VeryFitPro izay efa vita, natao tsara amin'ny lafiny fahitana, ary tena mora ny nifehy sy nifehy.
Developer: Fitaovana azo fitafiana marani-tsaina
Ny mahatsara sy maharatsy ny Arbily ID205
Alohan'ny hanazavana izay nisy azy ireo, Araka ny hevitray, ny antsipiriany tsara indrindra sy tsy azo ovaina amin'ny Arbily ID205, mila milaza izany izahay vokatra tsara io. Amin'ny lafiny famokarana dia fitaovana io namboarina tamin'ny akora tsara kalitao. Ity dia zavatra iray izay tsikaritra rehefa mitazona azy eny am-pelatananao, ary izany dia manamafy amin'ny fampiasana isan'andro.
Tsy maintsy dinihintsika ihany koa izay rehetra azony atao vidiny tena tsy azo resena. Azontsika lazaina izany Izy io dia manana ny fiasa rehetra izay ilaintsika ankehitriny amin'ny Smartwatch. Ary manaraka azy ihany koa amin'ny vidiny tena mahaliana.
Na tianao izany na tsia, dia io ihany, ny tsiro. Saingy afaka milaza isika fa famantaranandro tonga lafatra ho an'ireo maniry izany manana "ny zava-drehetra" eo an-tananao nefa tsy mandany vola be. Ny fananana fampandrenesana, firaketana ny hetsika ara-panatanjahantena, ary mazava ho azy, mandritra ny fotoana, dia fitaovana mety indrindra izy io.
Latabatra fampisehoana teknika
efijery 1.3 santimetatra
Hikasoka ny efijery SI
Sarin'ny loko SI
Bokotra ara-batana Bokotra 2
bateria 210 Mah
lanja 118 h
lafiny X X 11 7.8 5.6 sm
vidiny 49.99 €
Rohy mividy Tsy misy vokatra.
Kaody fampiroboroboana miaraka amin'ny fihenam-bidy 15% B2QVAWNN
Un famolavolana ankehitriny mifanaraka amin'ny tolotra izay hitantsika eny an-tsena.
Safidy marobe Azo kitihina iray avy amin'ny menio iray feno izay mihatsara amin'ny fampiharana.
Famakiana ny hafatra feno amin'ny efijery amin'ny smartwatch miaraka amin'ny WhatsApp na mailaka.
fitaovana ny fananganana mahatohitra sy tsara kalitao izay mahatonga azy ho fitaovana matanjaka.
Fahaleovan-tena sy fiainana bateria izay mihoatra ny herinandro.
Safidy sy safidy tena feno
Fampahalalana amin'ny efijery tena feno
Indraindray ny fampifanarahana dia tsy nahomby tamintsika ny fitaovana misy IO na dia tsy misy aza ny Android.
La fandrefesana ny hetsika lavitra amin'ny GPS navitrika indraindray tsy dia marina loatra.
La tontonana eo anoloana azo nampiasaina bebe kokoa tamin'ny efijery somary lehibe kokoa.
Tsy fahombiazana amin'ny fampifanarahana manokana
Famarana GPS somary tsy marina
Eo aloha tsy ampiasaina
ID 205 Arbily
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » About us » hevitra » Famerenana smartwatch Arbily ID205
DANIEL SANCHEZ dia hoy izy:
Vao nividy iray aho, dia gaga tamim-pahatsorana hatramin'ny fotoana voalohany nitondrako azy teo am-pelatanako, ny fampisehoana tao anaty boaty dia namela fahatsapana tsara ho ahy, rehefa nahita azy aho dia talanjona tamin'ny habeny kely sy ny endrika minimalista, na dia izany aza. maivana, azo antoka fa toy ny hoe nandoa vola kely ianao tamin'ny zavatra tena lafo vidy, saika tsy tena izy. Ny efijanony, na dia voafetra aza, dia manintona sy miasa, ankoatry ny 1 sy ireo fiasa hitako dia nahatonga ahy ho afa-po ihany koa, tsy isalasalana fa atoroko ho an'ny olona maniry ny hanao fatiantoka marani-tsaina izay tsara natao, mahatohitra ary tsy mahavoa. ny paosy misy vidiny mirary ho marika malaza indrindra.
Valio amin'i DANIEL SANCHEZ
Dark Sword 2 dia mitondra ny zava-drehetra nataoko malaza ho an'ilay teo aloha, fa tamin'ity indray mitoraka ity miaraka amin'ny mahery fo telo
Ny Exynos 9825 dia mampiseho ny famelomana ny Galaxy Note 10 amin'ny sehatra Geekbench